अब पर्ला कि लभ ?
रेनेशा बान्तवा राईले ‘आई एम ट्वान्टी वान’मा धीरज मगर र जसिता गुरुङको जोडी बनाउने खबरसँगै शहरमा दुवैको अफेयरको हल्ला फैलियो। हल्ला चल्दा धीरज लन्डनमा थिए, जसिताले यसको जवाफ दिनुपर्‍यो। उनले आफू प्रतियोगी भएको एउटा इभेन्टमा देख्नुबाहेक धीरजसँग बोलचालसमेत नभएको स्पष्टीकरण दिइन्।
तर, जसिताले झुटो बोलिन् कि साँचो, भेरिफाई गर्ने कसले ? नेपालमा भएको भए पो थाहा हुन्थ्यो। जसिताले यसो भनिरहँदा बजारमा भने उनको र प्रदीप खड्काको चक्कर चलिरहेको आशंका थियो। किनकि, दुवैले ‘लिली बिली’ र ‘लभ स्टेसन’मा सँगै काम गरेका थिए र यहाँ पनि जसिताले प्रदीप राम्रो साथी मात्र भएको बताउने गरेकी थिइन्।
जे होस्, धीरज र जसिताको जोडी अहिले सँगै फिल्म खेल्दै छ र धमाधम फिल्मको वर्कसपमा सहभागी भइरहेको छ। निर्देशक रेनेशाले केमेस्ट्री जमाउन दुवैलाई जताततै सँगै हिँडारइरहेकी छिन्। साथ रहँदा बस्दा नै हो माया पलाउने। अब चाहिँ लभ नपर्ला भन्न सकिन्न !